W. Dakhliga M.M Goday Oo Shahaadooyin Abaalmarino ah Bixisay - Cakaara News
W. Dakhliga M.M Goday Oo Shahaadooyin Abaalmarino ah Bixisay
Goday(cakaaranews)Axad 21ka August 2016. Shir balaadhan oo uu soo agaasimay wakaalada dakhliga Maamulka magaalada goday islamarkaana ujeedadiisu ahayd abaal marinta canshuur bixiyayaasha, soojeedinta bayaanka cusub ee dakhliga iyo waliba abaalmarinta maamulka xafaadaha moodheelka ku noqday kashaqaynta arimaha dakhliga ayaa maanta si habsamileh uga qabsoomay hoolka shirarka ee Maamulka Magaalada Goday.
Hadaba, furitaankii Shirkan ayaa waxaa ugu horayn kahadlay Maayorka Magaalada Goday mudane Cabdisamad Aadan cismaan oo ugu horayn u mahadceliyay dhamaan kaqaybgalayaasha islamarkaana sheegay in shirkani yahay mid lagu abaalmarinayo xubnihii sida fiican uga qaybqaatay dakhliga. Wuxuuna intaa kudaray maayorku in sidookale kaqaybgalayaasha loo soojeedindoono bayaanka cusub ee dakhliga.
Dhankakale, waxaa isna shirkan kahadlay maareeyaha wakaalada dakhliga M.M Goday mudane cabdulaahi yaasiin Maxamed oo sheegay in shirkani uu kamidyahay qorshayaasha kor loogu qaaadayo arrimaha dakhliga iyo sidii looxoojinlahaa wadashaqaynta wakaalada dakhliga iyo dhamaan canshuurbixiyayaasha maamulka magaalada goday. Wuxuuna xusay maareeyuhu in shirkan canshuur bixiyayaasha lagu abaalmarinayo uusan ahayn kii ugu horeeyay islamarkaana uusan noqon doonin kii ugu danbeey oo ay jiri doonaan shirarkale oo la isku abaalmarindoono. Wuxuuna amaan iyo mahadcelin u soojeediyay canshuur bixiyayaashii mutaystay shahaado sharafta.
Waaxaa iyana dhankooda kahadlay islamarkaana si quruxbadan u soo jeediyay bayaanka cusub ee dakhliga Agaasimayaal kasocday wakaalada dakhliga heer deegaan.
Ugudanbayna xubnihii mutaystay abaalmarinta ayaa halkaas lagu abaalmariyay iyagoo lasiiyay shahaado sharaf.